🥇 ▷ Soo dejiso WhatsApp AERO 【√ v7.100】 ✅
Soo dejiso WhatsApp AERO 【√ v7.100】
Hadaad tahay a Taageerayaasha MOD oo aad jeceshahay inaad isku daydo dhammaan kala duwanaanshaha soo baxa, ka dibna soo degso WhatsApp Aero.
Haddii aad eegto inta badan wax ka beddellada ay ku sameeyeen WhatsApp, waxaad arki doontaa in wax walba ay lamid yihiin, waana tan sababta inbadan waxay ka dhasheen horumarin sida GBWhatsApp.
Dhibaatadu waxay kacdaa markii aysan sidaas ahayn, oo waxaan helnay qaar ka mid ah noocyada ‘MODs’ oo uga tegey waxyaabo badan oo la doonayo.
Nasiib wanaagse, oo leh WhatsApp Aero tani ma dhicin, MOD wuxuu u dheer yahay inuu siinayo dadka isticmaala Isbeddellada qurxinta ee farriinta degdegga ah ee codsiga., midkoodna natiijooyin tayo leh.
In kasta oo howsha codsigan ay lamid tahay isbadallada kale, Taabashada xiisaha badan ayaa asal ah. iyo garaacis marka loo eego kala duwanaanshaha kale ee WhatsApp.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad xiiseyneyso: Soo degso WAPWhatsApp (nooca cusub)
Waxa ugu horreeya ee aan arki karnaa waa sidee Isbeddelada ku jira interface-ka ayaa ah kuwo aan caadi ahaynSidaa daraadeed, waxaan wajahaynaa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan kuwa doonaya inay ku isticmaalaan sheekadan qaab shaqsiyeed.
Astaamaha ugu muhiimsan ee WhatsApp Aero
Halkan waxaan ku tusaynaa tan ugu weyn Tilmaamaha iyo howlaha WhatsApp Aero, taas oo, in kasta oo ay la mid tahay noocyada kale ee ‘MODs’, haddana had iyo jeer waa muhiim in aad ogtahay waxa aad ka heli doontid marka aad soo dejisanaysid:
Dabacsanaan badan ayaa ku jirta dirista feylasha..
Mawduucyo kala duwan oo la soo dejinayo.
Ku soo degso WhatsApp Aero ee Android
Haddii aad rabto inaad doorato nooc ka duwan oo ah barnaamijka rasmiga ah ee WhatsApp, kaas oo aad ku hagaajin karto wax kasta oo laxiriira suuxinta, ha ka labalabeyn, iyo Soo dejiso WhatsApp Aero APK (dhagsii halkan si aad u aado bogga rasmiga ah ee MOD).
Xusuusnow, si aad u soo dejiso Muuqaalkan, waa inaad marka hore uninstall-gartaa barnaamijka rasmiga ah oo aad dhaqaajiso “Asalka lama garanayo” doorashada ee “Dejinta” iyo “Codsi”.
Tani waa wada akhlaaqiyaadka, haddii nidaamkaaga qalliinka qalabkaagu uu yahay Android, Waxba kuma lumi doontid adigoo isku dayaya kala duwanaanshaha WhatsApp kaas oo aad ku arki doontaa interface interface sida aad rabto.